Accueil > Gazetin'ny nosy > Karama tapaka: Mitetika fanonganam-panjakana ny Ministeran’ny Vola (MFB)
Karama tapaka: Mitetika fanonganam-panjakana ny Ministeran’ny Vola (MFB)
Omaly alarobia faha 27 desambra 2017, dia tonga nilahatra teo anoloan’ny ministeran’ny Vola sy ny tetibola ny mpiasam-panjakana izay tapaka karama volana desambra 2017 ity teto Antananarivo. Miisa teo amin’ny 100 teo izy ireo ka ny filohan’ny sendika vitsivitsy no nitarika izany izay notarihin-dramatoa Fanirisoa Herinaivo filohan’ny Sendikan’ny mpitsara Malagasy (SMM). Tonga tamin’izany koa ny filohan’ny Sempama na ny Sendikan’ny mpampianatra eto Madagasikara notarihin’ingahy Ravoatra Claude. Nahitana ny sendikan’ny Paramed, ny dokotera ary ny mpiasam-panjakana ambony koa izany.
Nieritreritra hihaona tamin’ny minisitra ny Vola sy ny tetibola izy ireto, nefa tsy nahazo azy. Tale iray no nandray azy ireo. Nangataka ny hihaona tamin’ny tale jeneraly miandraikitra ny fitantanam-bola sy ny mpiasam-panjakana (DGGFPE) ramatoa Hanta Razafitsalama ireto solontenan’ny sendika sy ny mpiasam-panjakana tapaka karama ireto nefa tsy tao ity ramatoa ity fa any Frantsa hono rehefa avy namoaka ny didy fanapahana ny karama izao.
Nolazain’ny delegasionina ireto izay nihaona tamin’ny tompon’andraikitra nasain’ny minisitra ny Vola nihaona tamin’izy ireo fa fandrirarirana ny mpiasam-panjakana no nataon’ireo mpiasan’ny ministera ireto. Voalohany indrindra dia mitaky ny taratasy fanamarinana ny maha mpiasam-panjakana (certificat administratif) azy ny ministeran’ny Vola mba hahazoana mandoa ny karamany hatramin’ny zoma faha 29 desambra 2017 izao. Ny ministeran’ny Vola ihany anefa no milaza fa fahadisoana avy amin’ny solosaina no nitranga fa tsy avy amin’ny mpiasam-panjakana velively. Dia nifamaly tamin’izany ny roa tonta satria mitaky ny hamerenana ny karama ao anatin’ny roa andro ny mpiasam-panjakana ka rehefa vita izany vao mijery ny mpiasam-panjakana izay lazaina fa matoatoa izany. Manaraka izany dia milaza ny mpiasam-panjakana fa olona 20 000 latsaka kely no tapaka karama manerana an’i Madagasikara, nefa ny fanjakana milaza fa 10 000 ihany izany. Ny any ambanivohitra koa dia voalazan’ireto sendikan’ny mpiasam-panjakana ireto fa be dia be no tapaka karama, ka na inona na inona no hatao dia tsy ho tonga aty Antananarivo ao anatin’ny roa andro izany araka ny filazan’ny ministera fa ny zoma faha 29 desambra 2017 izao dia ho voaloa ny karaman’izy ireo rehefa manana io taratasy fanamarinana io. Ny taratasy fanamarinana voalaza eto dia ny tale ihany no mahazo manome izany izay mbola olana be koa ny fahazoana azy ho an’ireo izay mihataka ny renivohitra.
Tsy nisy zavatra tapaka tao amin’ny fihaonan’ny roa tonta, satria nanao resaka ny moana sy marenina ny andaniny sy ny ankilany raha toa ka ny tatitra nataon’ireo mpivory no asian-teny.
Ankilany indray, naneho ny heviny teo an-tokontany ny ministeran’ny Vola ireto mpiasam-panjakana tapaka karama ireto ka hoy indray ingahy Lemitova Sylvestre izay isan’ireo tapaka karama: “Rehefa tsy matin’ny pesta ny Malagasy dia notapahina indray ny karamany amin’izay hovonoina ho faty amin’ny fomba hafa indray. Ny asan-dahalo natao hamonoana ny ambanivohitra izay efa mikaikaika tsy misy mijery andro aman’alina. Famonoana ny Malagasy izao ataon’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina izao, nefa tsy tonga saina ny vahoaka”. Fanjakana tsy misy ilana azy intsony, hoy hatrany ity lehilahy ity. Izy moa dia nilaza fa mpiasan’ny ministeran’ny Fahasalamana.
Ny mpiasam-panjakana izay niresaka teo amin’ity toerana ity koa no nilaza fa “mitetika ny hanongam-panjakana ny ato amin’ny ministeran’ny Vola. Fomba natao hampitroatra ny vahoaka izao zava-mitranga izao saingy ny olona no efa dondrom-belona”. Ny an’ireo sasany aza dia milaza fa ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina mihitsy no efa mitady korontana fa ny vahoaka no tsy tonga saina. Marobe ny korontana nataon’ny fanjakana izay hampilatsaka an-dàlambe ny vahoaka hoy ihany ireto olona ireto fa mahagaga no tsy mety mihetsika ny olona?
Nanambara ireo mpitarika sendika ireto fa ny faha 5 janoary 2018 no hivory indray izy ireto ary handray fanapahan-kevitra.
Mpiasan’ny ministeran’ny Vola iray no nilaza fa efa notenenina tamin’ity fanapahan-kevitra hanapaka karama ity ny tompon’andraikitra tato fa tsy nety, ka dia io miseho io ny raharaha ankehitriny. Ho hitantsika eo ihany ny tohiny.